स्वास्थ्य बिमा गरेपछि कस्ता सेवाहरु पाइन्छ ? - Aamsanchar
स्वास्थ्य बिमा गरेपछि कस्ता सेवाहरु पाइन्छ ?
काठमाडौं – नेपालमा प्रतिवर्ष प्रत्येक ६ परिवारमध्ये एक परिवार स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण विपन्न हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यही तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विपन्न र न्यून आय भएका नागरिकका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैमध्ये विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालनरत एउटा कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आगामी साउनदेखि बिमितका लागि अस्पतालहरुमा विशेष सेवा विस्तार गरिने भएको छ । पाँचवर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लक्ष्यअनुरुप प्रभावकारी नभएपछि बिमितहरुका लागि परामर्शलगायतका सेवा विस्तार गर्न लागिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । पाँचौँ स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर आजैदेखि ६ वटा जिल्लामा बिमा दर्ताको भर्चुअल उद्घाटन पनि गरिँदैछ । नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०७२ सालमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ६९ जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
किन दर्ता हुने सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारले न्यून आर्थिक स्तर भएका नागरिकका लागि लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ वार्षिकरुपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी एम.डी आरटीडी, अति असक्त, अपांगता भएका परिवारको हकमा भने यो रकम सरकारले नै बेहोर्छ । त्यसैगरी महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले पनि यो रकम आधामात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ७० वर्षमाथिका नागरिकहरुले पनि यो रकम तिर्नुपर्ने छैन । त्योभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रतिसदस्य सातसय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
यसरी एकपटक जम्मा गरेको रकमले १ वर्षसम्म एक लाखसम्मको आकस्मिक, तथा बहिरंग सेवा निःशुल्क पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि तोकिएको अस्पतालले बिमा कार्डमार्फत् सेवा प्रदान गर्नेछन् । बिमा दर्ता गर्दा सूचीकृत भएका परिवारका जुनसुकै सदस्यले यो सुविधा लिन पाउँछन् । तर बिमा सुविधामा रहन प्रत्येक वर्ष सोही रकम तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुले ११३३ प्रकारका औषधि तोकिएका अस्पतालहरुबाट निःशुल्क पाउँछन् । अस्पताल भर्ना भइ अन्तरंग सेवा लिनुपरेमा पनि बिमामार्फत् प्रदान गरिन्छ । त्यस्तै एक्सरे, इसीजी, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई, सिटीस्क्यान, रगत, पिसाब आदिको जाँच पनि यही बिमा सेवाअन्तरगत नै पर्दछन् ।
आकस्मिक तथा ओपीडी सेवासँगै सानाठूला शल्यक्रियाहरु पनि यही सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिन्छ । जसमा, एपेन्डिक्स, पत्थरीजस्ता शल्यक्रिया पर्दछन् । त्यस्तै बिमितहरुलाई निश्चित मूल्य बराबरको चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, बैशाखी आदिपनि यही सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिन्छ ।
पाँच जनासम्मको परिवारमा एकलाख रुपैयाँसम्मका सेवा एक वर्षमा उपलब्ध हुनेछ । यो सुविधा पटक–पटक गरी या एकैपटक उपभोग गर्न सकिन्छ । नियमित नवीकरण गर्दा यो सेवा वर्षेपिच्छे लिन सकिन्छ । पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारमा एक सदस्य बराबर २० हजारका दरले सेवा लिन सकिन्छ ।
कहाँ कहाँ पाइन्छ बिमावापत्को सेवा ?
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन गरी ३७५ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । बिमितहरुले स्वास्थ्य सेवाका लागि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थालाई रोज्न सक्छन् । बिमा परिचयपत्रको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्नेछन् । यदी बिमितको उपचार सेवा सो संस्थामा उपलब्ध नभएमा स्वास्थ्य संस्थाले नै बिमा कार्यक्रम लागु भएको अर्को अस्पतालमा रिफर गर्न सक्छन् । तर आकस्मिक सेवाको हकमा भने जुनसुकै (बिमा बोर्डमा सूचीकृत) स्वास्थ्य संस्थामा बिमा कार्ड लागु हुनेछ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रत्येक स्थानीय तहमा बिमा दर्ता अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुमार्फत् परामर्श र सेवाबारे जानकारी लिई यो कार्यक्रममा आवद्ध हुन सकिनेछ ।
अहिलेसम्म कति नागरिक लाभान्वित भए ?
०७२ चैत २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट सुरु भएको सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ६९ जिल्लामा पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङमा आजदेखि भर्चुअल रुपमा दर्ता गरी आजैदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरिँदैछ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म ३७ लाख ४२ हजार ६५६ जना यो कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका छन् । बिमितमध्ये १४ लाख ४५ हजार ५३३ जनाले बिमा कार्यक्रममार्फत् सेवा लिइसकेका छन् । जसमध्ये ७० प्रतिशतले नियमित नवीकरण गर्ने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । सन् २०३० सम्ममा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भेट्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
त्यसका लागि अहिले १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी ६० प्रतिशतमा पुर्‍याइने स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको उप्रेतीको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाले र घातक रोग उपचारका लागि एकलाख रकम पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र घातक रोगको उपचार सेवा सरकारका दुई फरक कार्यक्रम हुन् । बिमा कार्यक्रममा समेटिएकाहरुले तीनहजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक योगदान गरेबापत् १ लाखसम्मको सेवा लिन पाउनेछन् भने घातक रोगहरुका लागि सरकारको छुट्टै कार्यक्रम छ । क्यान्सरलगायतका विभिन्न ८ वटा रोगहरुका लागि सरकारले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा एकलाखसम्मको उपचार सेवा तोकिएका अस्पतालबाट छुट पाउन सक्छन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिएका नागरिकले यो दुवै सुबिधा लिन पाउनेछन् । तर घातक रोगका लागि एकपटक एकलाखमात्रै सुविधा उपलब्ध छ भने बिमा कार्यक्रममा नवीकरण गरेको आधारमा वर्षैपिच्छे सेवा लिन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा सेवामा समेटिएका नागरिकहरुलाई सबै औषधि अस्पतालबाटै उपलब्ध गराउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि औषधि थप गर्ने लक्ष्यसमेत रहेको बोर्डका अध्यक्ष डा. उप्रेतीले बताए । त्यस्तै अहिले ऐच्छिक रुपमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छिट्टै सबै नागरिकमा लागु गरिने उनको भनाइ छ ।